नथाकेकी आमा ! छोराको हत्यारालाई सजाय दिलाउन चार वर्षको प्रयास सफल, ४ प्रहरी प्रमुख फेरिँदा बल्ल अनुसन्धान - Gandak News
रुँदा रुँदै आँशु सकिएकी विष्णुको अझै आशंका, 'समातिएछन्, अब त नछोड्ला नि ?'
रञ्जन अधिकारी द्वारा १८ बैशाख २०७६, बुधबार १६:५१ मा प्रकाशित
‘एसपी हरी पाल, घनश्याम अर्याल, अशोक सिंह, ओम राना सबैले अहिलेसम्म हुन्छ हुन्छ मात्र भन्नुभयो । कसैले केही गर्नुभएन । घटना भएको राति मेरो छोरालाई कुटेको देख्ने मान्छेहरु पनि छन् । उनीहरु त्यो बेलामा पनि बोलेका थिए र अहिले पनि बोल्न तयार छन् । म त बहुलाइसकेँ रे । म सधैं यहाँ आउँछु, रुन्छु, कराउँछु, मुर्छा पर्छु । तर, अहँ मलाई कसैले वास्ता गर्दैन । सबैले दिमाग खुस्किसक्यो भन्छन् । म मेरो छोरो मार्नेलाई सजाय नभएसम्म, मेरो खुट्टा चल्ने बेलासम्म पोखरा आइरहन्छु ।
विष्णुकुमारी पाण्डे, ६६ मृतक सूर्यकी आमा
४ वर्ष बीचमा ४ प्रहरी प्रमुख फेरिए । केहीलाई नियन्त्रणमा लिएर छाड्ने बाहेक केही काम भएन । एसपी ओम रानाले कास्कीको कार्यकाल पूरा गर्दैगर्दा जाहेरी परेका तीन जनालाई पक्राउ गरेका छन् । यद्यपी, उनी आएदेखि नै यस केस अघि बढाउन कार्यालयमै दर्जनौं पटक पुगेर विष्णुले अनुनय विनय नगरेकी होइनन् । अघिल्ला तीन एसपीले अघि बढाउन जाँगर चलाएनन् । जाहेरी परेका दुई जना संलग्न नभेटिएको भन्दै फाइल अघि बढाउन नै खोजेनन् । राना कास्की आउने बित्तिकै (२३ साउन, २०७५) गण्डकन्यूजको टीम सहित विष्णुकुमारी जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगिन् । एसपी रानाले मुद्धाफाँटलाई तुरुन्त फाइल अघि बढाउन निर्देशन दिए । बीचमा यो अनुसन्धान अघि बढेन । अहिले वैशाखमा भने फाइल अघि बढ्यो, जाहेरी लियो र अभियोग लागेकाहरुलाई पक्राउ गरेपछि केस अघि बढेको छ ।